Claudia Bikini Swimsuit Hot bhurukwa Boy zvikabudura PDF Sewing romance – The Tailoress
musha / Women / Swimwear / Claudia Bikini Swimsuit Hot bhurukwa Boy zvikabudura PDF Sewing romance
Low-simukai hipster zvikabudura akagadzirirwa zvakananga tatamuka Jersey kana lycra micheka. The Claudia zvikabudura rinogona kuitwa sezvo swimwear kana kungoti sezvo zvikabudura. Ndivo zvishoma refu kunhivi musana kupfuura mberi.
Sikai mukati tatamuka Jersey kuti kupfeka pamusoro swimwear sezvo zvikabudura kana kushandisa tatamuka lycra jira akadai chamunyurududu Jersey kushandiswa sezvo swimwear. Vanogona kuva mudungwe kana unlined zvichienderana zvaunofarira.
Categories: zvikabudura, Swimwear, Women
Nokuti bhikini aimiririra tapota kuona Marisa Bikini. Bikini muenzaniso kutengeswa yoga.
Please kuona Claudia zvikabudura Tutorial pano kana baya Tab pazasi kuti kurivhura ari papeji ino.
Mirayiridzo Printing anogona kuwanikwa pano
Copyshop saizi: 40masendimita X 68cm / A4 Pages: 8 / US Letter: 8
Claudia zvikabudura Tutorial
Unogona kuita kuti anomira zvikabudura yokuwedzera mukurumari. Shandisa kaviri jira chete kana pajira riya uye kungoita kaviri vakakwira zvidimbu sezvo iwe sona.
Tanga nokuisa maviri zvikabudura muenzaniso zvidimbu KODZERO panhivi pamwe.
Hoko Musono mberi BACK pakati vazvo pamwe chete.
Kudimburira uye kupedzisa musono dzichashivirira vachishandisa Zig-zag Musono kana overlocker Musono.
Kuvhura mberi neshure crotch, Kuisa mberi neshure crotch musono mugove KODZERO mativi pamwe.
chipeneti, Musono uye kupedzisa musono dzichashivirira.
Kupedzisa musono Kushivirira amakumbo mawindo vachishandisa Zig-zag Musono kana overlocker.
Peta shure musono Kushivirira amakumbo hwomukova kune NGOZI RUTIVI uye pamusoro-Musono pamwe Zig-zag Musono kuwana.
Chekai urefu kwakavharwa nenyama anoenderana zvakafanana kureba sezvo pebhanhire muenzaniso chidimbu.
Nanganisa maviri mapfupi musono Kushivirira kubva pebhanhire KODZERO mumativi pamwe.
Musono uye vachekerere musono mugove.
Hwokuchengetedza kwakavharwa nenyama, pane nokusona musono dzichashivirira KODZERO mativi pamwe, bindepinde imwe musono ngaabvumire pana vamwe ipapo kusona. Izvi tichadzivisa zvakawandisa hombe mu pebhanhire.
Peta pebhanhire iri hafu lengthways. Nanganisa mbishi musono Kushivirira kuti chiuno chomusikana ari zvikabudura. Dzinoisa mashoko kwakavharwa nenyama pakati akapeta pebhanhire.
Nanganisa musono mutsara pebhanhire kusvika BACK musono mutsetse uye kuderedza zororo kumativi.
chipeneti, Musono uye kupedzisa musono mugove kuona kwete kusona kubudikidza kwakavharwa nenyama.
Kopa * PRODUCT NAME * PDF Sewing romance pano
£ 3.91 Wedzera ngoro
£ 4.95 Wedzera ngoro